I-Raw S-23 powder (1010396-29-8) Abavelisi - Phcoker Chemical
SKU: 1010396-29-8 Udidi: Sarm Series
I-Raw S-23 powder (1010396-29-8) ividiyo
I-Raw S-23 powder (1010396-29-8) inkcazelo
I-Raw S-23 powder yiklasi leziyobisi ezibizwa ngokuba yi-SARM, isisombululo sokwenza uphando kunye ne-androgen receptor, njengendlela yokukhulelwa kwe-hormone yamadoda. I-23 nge-orally ayifumaneki, ithetha ukuba inokusetyenziswa ngeepilisi kunye neepsules. Izifundo zibonise i-S23 ukwenzela ukwandisa ubunzima obubuthakathaka kunye nesisipha samathambo ngelixa kunciphisa amafutha omzimba. Idibanisa ne-androgen receptor (AR) ngokubanzi kakhulu (kunye ne-Ki ye-1.7nM) xa kuthelekiswa namayeza amadala afana ne-Andarine, kunye nokufundiswa kwezilwanyana Kwabonisa kokubili isilinganiso esihle se-anabolic kwimiphumo ye-androgenic, kunye nokuxothwa kwe-spermatogenesis ngokuphulukana ngokukhawuleza emva kokupheliswa kophando.
I-Raw S-23 powder (1010396-29-8) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw S-23 powder
Igama leKhemikhali (S) -N- (4-cyano-3-trifluoromethyl-phenyl) -3- (3-fluoro, 4-chlorophenoxy) -2-hydroxy-2-methyl-propanamide, i-Raw S-23 powder I-SARM, i-UNII-XDK89456WM , I-CHEMBL512283, i-XDK89456WM, i-CCTH-methyl propionamide, i-SCHEMBL2816700, i-BDBM26261, i-DB07419, i-C-31, i-23, i-B5R
Inani leCAS 1010396-29-8
I molecular Fi-ormula C18H13ClF4N2O3
I molecular WSibhozo 416.7540328
IMasaisotopic Mass 416.055 g / mol
Ukuxuba Point 133-136 ° C
I-Biological Half-Life iiyure 11.9
Sukufaneleka Propylene Glycol, i-DMSO, i-Ethanol.
Sisibetho Tukushisa -20 ° C Ifreezer
I-Raw S-23 powder Aukuguquka Iipilisi zamapulisi ezi-Raw S-23 / iifomsules zokusebenzisa njengemithi yesondlo se-hormonal, zingandisa ukwanda kwemisipha, ukunciphisa amafutha
I-S-23 ingowesigaba esitsha seziyobisi ezibizwa ngokuthi i-androgen receptor modulators (SARM). IiSARM zilinganisa i-testosterone ngokuzibophelela kuma-receptors e-hormone kwiindawo ezithile zomzimba.
Ifana ne testosterone kunye namanye ama-SARM, i-S-23 iithagethi ezixubileyo kunye nezicubu zethambo ukukhuthaza ukukhula kwemisipha kunye nempilo yethambo. Ngokungafani ne-testosterone, i-S-23 powder ayijolise kwiisisu ze-prostate ngoko kungabangela ukuba i-prostate yande. Ngokuphambene noko, uphando lubonisa ukuba i-S23 inciphisa ubukhulu beprotate.
I-S-23 powder iya kuba yintando ephakamileyo yoluntu. Kucingelwa ukuba isebenzayo ekunyuseni ubukhulu bemisipha kunye nokunciphisa amafutha onke ngelixa kunemiphumo emibi yecala. Nangona kunjalo, i-S-23 powder ingakwazi ukunciphisa amanqanaba e testosterone, efuna ukuba abasebenzisi badinga unyango lwe-post-cycle (PCT).
I-S-23 powder (1010396-29-8) Indlela yokuSebenza
AmaSARM asebenza ngokuzibophelela kwiimvumi ze-androgen ezikhoyo emathanjeni nasemisipha. Ngokuxhomekeke kwi-chemical structure, i-SARM ezahlukileyo zinamanqanaba okukhetha.
Icandelo lento eyenza i-S-23 SARM iphumelele kakhulu ukukwazi ukuzibopha kunye ne-androgen receptors. Kodwa i-S-23 inesimo esiyingqayizivele kwaye esicacile kumathambo kunye nemisipha. Ngokuqhelekileyo, i-SARM isebenza ekuvuseleleni izakhi zofuzo ezijongene nokwakha iiprotheni ze-muscle kwaye zenza oku ngokuzibophelela kwi-androgens. Xa kusebenze, i-receptors yomzimba iya kunceda ekuvuseleleni amaseli okwakha amathambo.
I-S-23 ine-knack ye-LH ne-FSH yokunciphisa, oko kukukhokelela kwimiphumo yokukhulelwa kwayo, kodwa le nto yenzeke yesikhashana. Ngokusekelwe kuphando olwenziwe kwiinqwenkwe zendoda, i-S-23 ine-half-life of 11.9 iiyure. Umzimba uthatha malunga ne-96% yeSARM xa kuthathwa ngomlomo kunye nabasebenzisi bangafikelela kumazinga angamaqondo emva kweeyure ze-4 okanye kunjalo.
benefits I-S-23 powder (1010396-29-8)
▪ I-S-23 ikhulisa iMiscle kwaye iyanciphisa amafutha
▪ I-S-23 yoLawulo lokuzalwa koMama
▪ I-S-23 Ikhulisa Amandla Amandla
▪ I-S-23 ikhulisa isishukumiso soTyala ngesini
Ukuphakanyiswa kwe-S-23 powder (1010396-29-8) Isilinganisi
Ulwazi olulodwa lwedatha esinalo lusekelwe kwizifundo zezilwanyana. Ngokomzekelo, ii-rats zaseburhulumenteni zanikwa i-0.1 mg ngosuku ukuya kwi-3 mg ngosuku ngophando, nokuba ngomlomo okanye nge-injection.
Uninzi lwabalimi bomzimba lithatha i-10 kwi-30 mg ngosuku ngelixa ulwahlula i-dosage zibe zibini ukwenzela ukwandisa ubuncinane bezobisi. Uninzi lwabahlalutyi kwi-intanethi bathi baye basebenzisa i-S-23 njengenxalenye ye-8-week-cut cycle.
Imiphumela I-S-23 powder (1010396-29-8)
▲ Inkcaso. Kukho iingxelo zokunyuka komsindo ngelixa zithatha i-S-23, ngoko kusenokuba yinto engcono kunazo zonke abantu abanembali yengxaki yomsindo.
▲ I-Testosterone Shutdown. Ngokwabasebenzisi, i-S-23 yinto esondele kakhulu kwi-steroids eqhelekileyo ongayifumana kwimakethi ye-SARM. Oku kwenza ukuba kube yinto ekhethekileyo kwaye ibe namandla kakhulu, kunye nemiphumo yecala ehluke kakhulu kwezinye iiSARM.
▲ Urine emnyama-I-23 iboniswe ukuvelisa umbala womchamo omnyama, kodwa le mpahla-mpembelelo ingeyesikhashana kwaye iphela kuphela xa uhamba ngebhayisikili kunye ne-S-23.
▲ I-Testicle ShrinkageAbanye abakhi bomzimba baye baqaphela ukuba ama-testicles ayaphela xa besetyenziselwa i-S-23 kwaye kamva yaxhaswa ngophando lwesayensi olwenziwe ngempembelelo efanayo.